Petition Rohingya is not an Ethnic Nation of Burma
Campaign Group 0
Rohingya is not an Ethnic Nation of Burma
1796 people have signed this petition.	Add your name now!
Campaign Group0Comments
1796 people have signed. Add your voice!
အောက်ဖေါ်ပြပါကြေငြာစာတမ်းမှာ အင်္ဂလန်ရောက်မြန်မာတိုင်းရင်း သားများနှင့်
နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး အဖွဲ့များမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်ဖြစ်ပါသည်ယခုကြေငြာစာတမ်း နှင့်ပတ်သက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လက်မှတ်များကို အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ နှင့် UNITED NATIONS စသည့် ကမ္ဘာ.နိုင်ငံအသီးသီး နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများသို့ တင်ပြ၍ မြန်မာပြည်သူ များ၏ ဆန္ဒကို ဖေါ်ထုတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် မီဒီယာမှ တင်ပြခြင်း၊ ပါလီမန်ရှေ့တွင် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခြင်းများသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အရနိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်များ၏ စားပွဲပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် လက်ခံနိုင်သောအဆင့် သို့ ရောက်လေ့မရှိပါသဖြင့် ပြည်သူအများမှ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင်ပြလက်မှတ်ထိုးမှုအားတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများတင်ပြသော အမှန်တရားကိုနိုင်ငံတကာ အဆင့်မှလက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
လက်မှတ် ထောင်ပေါင်းများစွာ လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်သူအများမှ လက်ဆင့်ကမ်း၍ လှုံ့ဆော်ကြပါရန် လေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်) -- ယခုကြေငြာစာတမ်းအား လက်မှတ်ထိုးပြီးချိန် တွင် နောက်စာမျက်နှာ၌
ပေါ်လာသော အလှုငွေ ကောက်ခံသော စာမျက်နှာမှာ (Ipetitions web page ) ၏ သဒ္ဒါကြေး
ကောက်ခံလွှာ သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ထည့်ဝင်စရာမလိုပါ။ ယခု Ipetitions စာမျက်နှာကို ၎င်း
တည်ထောင်သူများမှ အခမဲ့သုံး စွဲရန် တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုလန်ဒန်ကြေငြာစာတမ်း ဆန္ဒကောက်ခံရေးအဖွဲ့မှ အလှုခံခြင်း မဟုတ်ပါသဖြင့်
ထည့်ဝင် ခြင်းမပြုကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။